Lynda ANDRIATSITONTA zon'olombelona	0 Commentaire juin 2, 2018
Sampandraharaha 260 sy mpikambana 10.000 ao amin’ny polisim-pirenena Malagasy no nizaràna boky kely mirakitra ny zon’olombelona. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny “Comité international de la Croix-Rouge” (CICR) sy ny polisim-pirenena Malagasy nandritra ny roa taona ity famokarana toro-lalana ho fampanajana ny zon’olombelona ity. Tapitra amin’ny taona 2018 ity ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta, mbola hitohy anefa ny fampiofanana ireo polisim-pirenena, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra avy ao amin’ny polisim-pirenena. Nanome fiofanana momba ny zon’olombelona ny CICR. Ny polisim-pirenena indray no hampianatra ireo polisy am-perin’asa na ireo vao hiditra momba izany. Zava-dehibe ny fampanajana ny zon’olombelona satria mifanindran-dalana amin’ny asan’ny polisy ny zo”.
Hampatsiahy ny polisy ny tokony ho fitondran-tenany amin’ny fanatanterahina ny asany ho fiarovana ny vahoaka ireo boky kely nomena azy ireo. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny roa tonta ihany koa ny famokarana peta-drindrina ho fampatsiahivana ny olon-rehetra ny fampanajàna zon’olombelona.
‹ DISTRIKAN’I BEROROHA: Misy amin’ireo kaominina mbola tsy misy “réseau”	› AMBAVAHADITOKANA : Efa misy ny zotra mampitohy an’i Mahamasina